Samsung Galaxy S8 တွင် Download mode ထဲ ၀ င်ရန် Androidsis
Samsung Galaxy S8 တွင် Download mode ထဲ ၀ င်ရန်
Elvis bucatariu | | Samsung, လဲ tutorial
Samsung Galaxy S8 နှင့် S8 Plus မှတစ်ဆင့် Download mode ကိုကိုယ်တိုင်လက်ဖြင့်မည်သို့မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်ကိုသင်သိလိုပါက၎င်းသည်နည်းလမ်းနှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားသောကြောင့်လာမည့်ပို့စ်တွင်သင်မည်သို့အောင်မြင်နိုင်မည်ကိုတစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြသွားပါမည်။ Galaxy S7 တွင်အသုံးပြုသည်။
ဤသင်ခန်းစာသည်သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးမှုများစွာမရှိသောကြောင့်အချို့သောခလုတ်များကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် Galaxy S8 ၏ Download / Download mode ကိုအလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်သည်။
1 Download mode ဆိုတာဘာလဲ။
2 မည်သည့် Galaxy S8 / S8 Plus မော်ဒယ်ကိုမဆို Download mode သို့မည်သို့တင်ရမည်နည်း
Download mode ဆိုတာဘာလဲ။
Download mode သည် Android 7.0 ၏သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသုံးစွဲသူများသည်အက်ပ်မှတစ်ဆင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်များကိုကိုယ်တိုင်တပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုထားသောလျှို့ဝှက်မီနူးတစ်ခုဖြစ်သည် ODIN နှင့် Samsung ယာဉ်မောင်း PC အတွက်ဒါမှမဟုတ် Galaxy S8 software နဲ့သင့်မှာရှိနိုင်တဲ့အခြားအမှားတွေကိုပြင်ပါ။
Samsung Galaxy S8 တွင် Physical Home ခလုတ်မရှိတော့ပါ။ ထို့ကြောင့် Galaxy S7 တွင် Download mode သို့ Boot လုပ်ရန်နည်းလမ်းသည်ပုံစံသစ်တွင်မရှိတော့ပါ။
သို့သော် Samsung သည် flagships အသစ်များ၏ဘေးတစ်ဘက်၌ထပ်မံခလုတ်တစ်ခုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ Bixby virtual assistant ကိုသက်ဝင်စေသည့်သီးခြားခလုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခြားလျှို့ဝှက်လုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်သော terminal mode ကို Download mode တွင်ဖွင့်ရန်ကူညီခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။
မည်သည့် Galaxy S8 / S8 Plus မော်ဒယ်ကိုမဆို Download mode သို့မည်သို့တင်ရမည်နည်း
ပိတ်တယ် သင်၏ Samsung Galaxy S8 terminal ကိုလုံးဝ
မိုဘိုင်းဖုန်းကိုပိတ်ထားသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ အောက်ပါခလုတ်များကို နှိပ်၍ ဖိထားပါ။ Volume down + Bixby ခလုတ် + Power ခလုတ်.
စတင်မျက်နှာပြင်ပေါ်လာသည့်အခါခလုတ်များကိုလွှတ်လိုက်ပါ။ သတိပေး ကိရိယာပေါ်မှာ။
ယခုသင်သည် button ကိုနှိပ်ပါ အတည်ပြုရန် Volume ကိုတက် Download mode သို့ဝင်ရောက်ပါ။ သင်ဤအရာကိုမပြုလုပ်ပါ၊ သို့မဟုတ် Volume ကိုနှိပ်လျှင်မိုဘိုင်းဖုန်းသည်စတင်လည်ပတ်လိမ့်မည်
ပြန်လည်စတင်ရန်သို့မဟုတ် Download mode ကိုထွက်ပါ Galaxy S8 တွင်သင်ခလုတ်ကိုဖိရမည် အသံအတိုးအကျယ်နှင့်ပါဝါသော့ နေစဉ်အတွင်း 10 စက္ကန့်.
ဒီသင်ခန်းစာကသင့်ရဲ့ Galaxy S8 သို့မဟုတ် S8 Plus ကို Download mode မှာ boot လုပ်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ပြproblemနာတစ်ခုခုတွေ့ရင်အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်ကိုချန်ထားရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Samsung Galaxy S8 တွင် Download mode ထဲ ၀ င်ရန်
Samsung Galaxy Note 8 သည် IFA 2017 တွင် iPhone 8 နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ပွဲထွက်နိုင်သည်
Xiaomi Mi6နောက်ခံပုံများရယူပါ